Wararka - Teknoolojiyadda 7aad ee Taizhou International Electrothermal
Teknoolojiyada 7aad ee Taizhou International Electrothermal
Laga soo bilaabo Nofeembar 1 illaa 3, 2019, 7th Taizhou International Electrothermal Technology and Exhibition Exhibition ayaa lagu qabtay Taizhou International Expo Center. Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. waxaa lagu casuumay inay kaqeyb galaan bandhiga waxayna soo bandhigeen wax soo saarkii ugu dambeeyay.Waxaan soo bandhigeynaa xirfad ahaanta, horay u eegida, iyo wax ku oolnimada keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka ee tikniyoolajiyadda elektaroolka iyo qalabka.
Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. waxay si buuxda uga faa'iideysatay fursaddan si ay uga qeyb gasho is-weydaarsiga qotada dheer, wada-xaajoodka, barashada iyo fahamka shuruudaha sare ee macaamiisha iyo rajooyinka laga qabo waxyaabaha kuleyliyaha carbide ee deegaanka ugu dambeeyay, waxaan leenahay waxay gaareen hadafka ah inaan kaamilno alaabtayada, ku dadaalno faa'iidooyinkeenna, iyo hagaajinta alaabada mustaqbalka. Bandhigani wuxuu sii ballaariyey saamaynta shirkadda iyo caan ku ahaanshaheeda isla warshadda, wuxuuna leeyahay faham qoto dheer oo dhammaystiran oo ku saabsan shirkadaha heerka sare iyo kuwa horumarsan ee isla warshadaha ah, sidaa darteed Bandhigga Teknolojiyada iyo Qalabka Teknolojiyada Caalamiga ah ee Taizhou waxaa ka buuxa guul!
Bandhigan, waxaan ku iftiiminay waxyaabihii ugu dambeeyay ee kuleyliyaha carbide kuleylka ee loogu talagalay qubayska daasadaha dhalada galaaska iyo aaladaha kuleylka leh ee heerkulka sare ee silsiladda kuleylka ee 1625 ° C.
In habka wax soo saarka ee muraayadda sabayn, tan iyo element kuleyliyaha carbon kuleyliyaha waa in deegaanka qubeyska daran daasad muddo dheer, waxaa jira shuruudo gaar ah oo adag oo ku saabsan walxaha kulayliyaha kaarboon silicon for qubeyska daasadda. Guud ahaan, qalabka kuleyliyaha carbide-ka silikoonku uma adkeysan karo wasakhda heerkulka sare iyo gaaska wax dila. Sidaa darteed, walxaha kuleyliyaha kaarboon-ka ee qubayska qasacaddu waa inuu lahaadaa cufnaan-kululeeye cufnaan leh oo leh adeeg aad u dheer.
Meelaha qaarkood ee daran, macaamiisha waxay leeyihiin shuruudo aad u adag iyo shuruudo kuleylka kuleylka ee walxaha kuleyliyaha kaarboon. Sida tan laga soo xigtay, SICTECH silsiladda kuleylka ee kuleyliyaha waxay soo saartay heer kul aad u sarreeya oo ah silsilad kuleyliyaha kaarboon kaarboon ah oo ka sarreysa celceliska heerkulka usheeda dhexe ee silsiladaha silikoon ee 1500 ° C, sidaa darteed heerkulka shaqadiisa uu gaaray 1625 ° C! Iyo in la siiyo macaamiisha kaladuwan fursadaha jirka kululaynta waxqabadka sare leh, ikhtiyaar ahaan MHD cufnaanta aadka u saraysa ee silsiladda kaarboonku kuleyliyaha jirka, HD jirka kuleylka cufnaanta sare leh, HD jirka kuleylka leh ee cufnaanta badan.
Bandhigga Teknolojiyada Kuleylka ee Korantada Caalamiga ah iyo Bandhigga Qalabka ee saddexda maalmood ah ayaa soo jiitay weydiimo badan oo ka qaybgalayaasha ah. Shaqaalaha Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd waxaa ka buuxay xamaasad iyo dabeecad halis ah, iyo sidoo kale xalal warshadeed oo xirfad leh. La taliyuhu wuxuu sharraxay mabda'a shaqada ee walxaha kuleyliyaha carbide-ka, isticmaalka taxaddarka hawlgalka iyo wixii la mid ah. Iyada oo loo marayo hawlgallo ballaaran oo kala duwan, muuqaal fiidiyoow ah, iwm, la-taliyuhu wuxuu leeyahay faham dhammaystiran iyo wacyigelin ku saabsan alaabteenna.
Iyada oo loo marayo this Taizhou International Electrothermal Teknolojiyadda iyo Bandhigga Qalabka, waxaan la kulannay macaamiisha, qeybiyeyaasha iyo asxaabta adduunka oo idil. Waxaan fahannay oo aan baranay teknoolojiyada iyo fikradaha ugu dambeeyay warshadaha kululaynta korontada. Waxaan ka warqabnaa inaan wax weyn ku darsan karno warshadaha kululaynta korontada iyo ilaalinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan si qoto dheer u fahansanahay waajibaadka iyo masuuliyadaha na saaran. Waxaan aaminsanahay inaan si adag horey ugu socon doono, oo aan ka soo fiicnaan doonno!